आफू जिते धनगढीको कायापलट हुने दावी
४९५४ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७४ जेष्ठ २३ , १०:४२ बजे
– दुर्गाप्रसाद जोशी (प्रमुख पदका उम्मेदवार)
धनगढी उपमहानगरपालिका, नेकपा एमाले
स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान धनगढी उपमहानगरमा केन्द्रित भएको छ । प्रदेश नम्बर ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका भएको र केन्द्रीय राजनीतिमा पनि धनगढीले प्रभाव पार्ने भएकाले सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु स्वभाविक हो । धनगढीको नगर प्रमुख (मेयर) मा नेकपा एमालेले दुर्गाप्रसाद जोशीलाई अगाडि सारेको छ । एमाले कैलालीका सचिवालय सदस्य तथा प्रचार विभाग प्रमुख रहेका जोशी लामो समयदेखि शैक्षिक पेशामा आवद्ध छन् । उनी नेपाल वेस्टन एकेडेमीका क्याम्पस प्रमुख समेत रहेका छन् । मेयरका उम्मेदवार दुर्गाप्रसाद जोशीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
– धनगढी उपमहानगरपालिकाको समग्र विकासँगै यहाँको समस्या समाधानको लागि मैले मेयरमा उम्मेदवारी दिएको छु । मसँग धनगढीलाई सुन्दर तथा विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने भिजन छ । मतदाताले विकास चाहन्छन् । त्यो भिजन नेकपा एमालेसँग मात्रै छ भन्ने कुरा बुझेका छन् । त्यसकारण यहाँका जनता मलाई जिताउनको लागि चुनावको मिति कुरेर बसेका छन् । एमालेको विकासवादी सोच जनताले बुझेका कारण धनगढी नगर क्षेत्रको विकास एमालेले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने आममतदातामा छाप परेको छ ।
तपाईका विकासका एजेन्डा के रहेका छन् ?
– भौतिक पूर्वाधारदेखि अन्य विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश नम्बर ७ सम्पन्न भएका कारण धनगढीलाई प्रदेश राजधानी बनाउको लागि पहल गर्नेछु । सहरी विकास तथा व्यवस्थापन क्षेत्रका विज्ञसँग त्यसको लागि छलफल गर्नेछु । त्यस्तै, ९ वटै जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने काम पनि मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन पहल हुनेछ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको १५ वर्षीय गुरुयोजना तयार गरिनेछ । यही योजना अन्तर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइने छ । यसका लागि आवश्यक लगानीसँगै आवश्यक स्रोतको लागि खोजी गर्नेछु । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै सडक सञ्जाल विस्तार गर्नेछु । धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडालाई छुने गरी चक्रपथ निर्माणको लागि पहल गर्ने मेरो योजना छ । यस्तै, ढल विकास, फोहर व्यवस्थापन, सडक सञ्जाल विस्तार तथा सुरक्षित धनगढी सहर निर्माणको लागि पहल गर्नेछु । यस क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै विशेष आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमार्फत् रोजगारीको सिर्जना गर्दै आर्थिक रुपमा समृद्ध धनगढीको विकास गर्नेछु ।
प्रत्येक वडामा नियमित अनुगमन समिति बनाइने छ । अनुगमन समितिले पनि बदमासी गरिएको पाइए जनताले सिधै मेयर तथा उपमेयरलाई सम्पर्क गर्नको लागि हटलाइनको व्यवस्था गरिने छ । राजनीतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन पहल गर्नेछु ।
युवा लक्षित योेजना के रहेका छन् ?
– युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिनका लागि प्रत्येक वडामा प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनाको लागि जोड दिनेछु । उनीहरूका लागि सीपमूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । युवाको नेतृत्व विकासको लागि पहल गरिने छ ।
अतिक्रमण र डुबानको समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
– जनताको तटबन्धको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउको लागि पहल गर्नेछु । स्थानीय तह स्वायत्त सरकार भएका कारण कटान र डुबानको समस्या पहिल्याउँदै त्रिवर्षीय योजना बनाइने छ । यसको लागि दातृ निकायबाट सहयोग लिँदै ३ वर्षभित्र यस क्षेत्रमा मोहना, खुटिया, शिवगंगा लगायतका नदीका कारण वर्षेनि हुने नदी कटान तथा डुबानको समस्यालाई नियन्त्रण गरिने छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाको जोखिम पहिचान गरी विपद् व्यवस्थापनको योजना बनाइने छ ।
यस्तै, जथाभावी अनाधिकृत रुपमा नदीनाला तथा अन्य सार्वजनिक जमिन मिच्ने कार्यलाई कडाइका साथ बन्द गर्नेछु । कानुन हातमा लिने जुनसुकै व्यक्तिलाई कानुनको दायरमा ल्याइने छ । व्यवस्थित ढल निकास, वृक्षरोपण एवम् नदी नालाको नियन्त्रणमार्फत् डुबानको अन्त्य गरिने छ ।
धनगढी–खुटिया–दिपालय फास्ट ट्रयाक ‘सपना जस्तै’ भएको छ । कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
– धनगढी–खुटिया–दिपालय मार्ग (फास्ट ट्रयाक) लाई विकास गर्दै आधुनिक मार्गको रुपमा निर्माण गर्नको लागि पहल गरिने छ । यसको चाँडो निर्माणको लागि प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारसँग पहल गर्नेछु ।
राना, थारु समुदायको हक अधिकारलाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
– धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र रानाथारु र डगौंरा थारु समुदायको सघन बसोबास रहेको छ । ती स्थानमा रानाथारु र डगौंरा थारु संस्कृतिको अध्ययन स्थलको रुपमा विकास गरिने छ । साथै, ती स्थानमा सम्बन्धित समुदायको सांस्कृतिक संग्राहलयको निर्माण गरिने छ । सिंहदरबारमा रहेको सरकार वडामा जाने भएकाले थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको स्थानमा उनीहरूको सरकार निर्माणको लागि पहल गरिने छ ।
दलित, मुक्तकमैया, सुकुम्बासी लगायत सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरणमा जोड दिने मेरो योजना रहेको छ । जीविकोपार्जन तथा जीवनस्तर अभिवृद्धिको लागि सीप तथा रोजगारीमूलक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई दोब्बर गर्ने योजना रहेको छ ।
खेलकुद र पयर्टनकोे विकासको लागि के गर्नुहुन्छ ?
– शारीरिक स्वास्थ्यका लागि प्रत्येक वडामा खेलकुद र व्यायामशालाको निर्माण गर्नेछु । खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि धनगढीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिक्रेट मैदानको निर्माण गर्नेछु । फूलबारी र जुगेडा क्षेत्रमा खेलकुद विकासका लागि आवश्यक विशेष पूर्वाधारको निर्माण गर्नेछु ।
मोहना नदी तथा मोहना करिडोरको संरक्षणमा विशेष जोड दिनेछु । मोहना नदी किनारको भागमा वृक्षारोपण गर्दै नदी नियन्त्रण तथा हरित साइकल लेनको विकासमार्फत् पर्यापर्यटनमा जोड दिनेछु । धनगढी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सबै समुदायको भाषा, कला तथा संस्कृतिको विकासको लागि विशेष योजना बनाई लागू गरिनेछ । जाखोर ताल, तिल्के ताल, बेहडा बाबा, शिवपुरी धाम, भादा होमस्टे लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण तथा थप पूर्वाधारको विकास गर्दै पर्यटकीय स्थलको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नेछु । गेटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण गर्न अग्रसरता देखाउने छु ।
स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र पशुपालन क्षेत्रको विकासको लागि के योजना छन् ?
– सेती अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गरी प्रदेशस्तरीय अस्पताल निर्माणको लागि मेरो विशेष जोड रहने छ । कैलाली क्याम्पसको विकास गर्नछु । प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गर्ने योजना छ । यस्तै, फूलबारी बहुमुखी क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगीक क्याम्पस बनाउन पहल गर्नेछु । २ थरि शिक्षाको विभेद अन्त्य गर्नेछु ।
कृषि तथा पशुपालनको आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायिक पशुपालन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिनेछु । शीत भण्डार गृह तथा ह्याचरी उद्योग स्थापनाको लागि पहल गर्नेछु । भू–उपयोग नीति निर्माण गर्नेछु । धनगढीमा कृषि क्षेत्र तथा वस्ती विकासको पहिचानको लागि जोड दिने मेरो योजना रहेको छ । जग्गा जथाभावी प्लटिङ्ग गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी सडक यातायात, खानेपानी बत्ति, सार्वजनिक स्थल लगायतको सुविधा सम्पन्न मात्र जग्गाको प्लटिङ्ग गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने छु । शिवगंगा, उर्मा, फूलवारी सिँचाइ आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नेछु । यस्तै, ल्यान्डफिलसाइटको निर्माण गर्नेछु ।
तपाईको प्रतिस्पर्धा कुन दलसँग रहन्छ ?
– एमाले राष्ट्रियताको अडान र एमाले गरेका विकासप्रेमी काम मतदाताले बिर्सेका छैनन् । पहिलो चरणमा एमालेप्रतिको जनलहरले एमाले चुनाव हार्दैन । त्यसैले मलाई चुनाव हार्छु भन्ने कुनै शंका छैन । तर, एमालेको प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुन्छ । प्रतिस्पर्धा भएपनि हामी सहजै चुनाव जित्छौं ।